Dukaammada Tray - Delta Engineering Belgium
ma guurto ah
Soo Saarista Birta
Tuur Qalabka Tijaabada
Baakado kaarboor ah
Dibadda u bixi
Gluing - Xumboobid
Xisaabiyaha Qaabka Istaroojinka Caalamiga ah
Isbarbardhigga bacda qiimaha iyo saxaaradda kartoonada
Xisaabinta Xirmooyinka Qaababka masaasadaha wareega
Xisaabinta Xirmooyinka Qaababka masaasadaha laba jibaaran
Xisaabiyaha tijaabada liinta
Xisaabiyaha korantada sare
Daraasadda culeyska shaqada ee hawlwadeenka
Shaxda Joogtada Qalabka
Wadarta Xisaabinta Qiimaha Plasma
Qalabaynta Injineerinka Delta (Romania)
Tijaabada liidashada / culeyska
Meelaha lagala xiriiro
Kaydinta qaybta "Warehouses Wareejinta"
Khamiista, 11ka Febraayo 2021 by Sara
Flat sheet & saxaarad saxaarad
Waxaad ku quudin kartaa santuuqa buuxa ee gogosha fidsan ama baakidh, kaas oo alaab-qaadahuhu midba mid u galiyo salkaaga. Waxay leedahay hal bakhaar. Nidaamka ladagaalanka ladagaalanka & nidaamka xudunta.
Published in Bakhaarada Wajiga
Isniin, 03 Agoosto 2020 by Sara
Sheet Flat, saxaarad & placer jir top
Waxaad ku quudi kartaa santuuqa buuxa ee gogosha fidsan, baakidh ama looxyada sare, kuwaas oo alaab-qeybiyeha kaladuwan uu mid mid ugu ridayo sariirtaada. Waxay leedahay laba bakhaar. Nidaamka ladagaalanka ladagaalanka & nidaamka xudunta.
Arbaco, 26 Maarso 2014 by Injineer Delta
Bakhaar saxaarad fudud oo is haysta ah
Bakhaarka saqafka ah ee kaydin kara ilaa 10 saxaro ama looxyada sare (dhererka saxaaradda ugu sarreysa illaa 160 mm).
Bakhaarka saqafka sare oo buuxa
Bakhaarka saqafka ah ee kaydin kara ilaa 24 saxaro ama looxyada sare (dhererka saxaaradda ugu sarreysa illaa 130 mm).
►ma guurto ah
►Soo Saarista Birta
►Tuur Qalabka Tijaabada
►Baakado kaarboor ah
►Dibadda u bixi
►Gluing - Xumboobid
►Habka la socodka
►Xaashi xaashi ah
►Kala wareejinta kuleylka ee naqshadeynta dharbaaxa
►Caqabadaha hor taagan
►Korantada & Farsamada
►Delta Injineer Beljam
►Magaalooyinka ku dhow
►Qalabaynta Injineerinka Delta (Romania)
Soo hel Bulsho
-Delta-Injineer. Dhamaan Xuquuqda Ayaa Leh.
Boggani wuxuu isticmaalaa kukasyada si loo hubiyo inaad hesho khibrada ugu fiican ee ku jira boggeena.
Kani waa nidaam aan qarsoonayn.
Fadlan gali cinwaanka emaylka shirkaddaada.
Cinwaan ayaa isla markaaba laguu soo dirayaa.
Isticmaalayaasha aan la aqoon waxay ku qasban yihiin oggolaanshaha marka hore.
Koontadaada ayaa shaqeysey, hada waad gali kartaa koontadaada.
Fadlan u oggolow dhexdhexaadiyayaashu in ay xoog ku shaqeeyaan xisaabtaada.
Iskuxirka diiwaangelintaada ayaa horeyba loogu diray emaylkaaga. Fadlan iska hubi galkaaga Inbox iyo Spam. Xiriir cusub oo isdiiwaangelin ah ayaa lasoo saari doonaa waxaana boostada loogu diri doonaa boostada marka la galo kaliya kadib 24 saacadood
Xiriirkaaga gelitaanka otomaatiga ayaa mar horeba laguugu soo diray emaylkaaga. Fadlan iska hubi galkaaga Inbox iyo Spam. Iskuxir gal cusub oo otomaatig ah ayaa lagasoo saari doonaa waxaana laguugu soo diri doonaa boostada markaad gasho uun kadib 120 daqiiqo
Fadlan xaqiiji cinwaankaaga emaylka adigoo gujinaya xiriirinta aan kuugu soo dirnay e-maylkaaga.
Fadlan isticmaal emaylkaaga si aad u gashid.
Waxaa laguu soo diray cinwaanka leh galka galka.
Sababo amni awgood email ayaa loo diri doonaa . Fadlan dhagsii iskuxirka gudaha e-maylkan si aad u hesho marin buuxda bogga.
Waxaa laguu soo diray cinwaan leh xiriiriye diiwaangelin. Fadlan iska hubi galkaaga Inbox iyo Spam. Xiriiriyaha ayaa shaqeynaya 24 saacadood.
SOO GAL / DIIWAANGEL
Xiriirka galitaanka waxaa kaliya loo isticmaali karaa kombiyuutarka asalka ah.
Adeegyadeena ayaa mashquul ah, fadlan mar labaad isku day mar dambe ama nala soo xiriir.
Adeegyadeena waxay soo celiyeen cilad, fadlan isku day mar kale mar labaad ama nala soo xiriir.
Adeegyadeena waxay soo celiyeen astaan ​​dhameystiran, fadlan isku day mar dambe ama nala soo xiriir.
Xiriirkaaga galitaanka ayaa dhacay. Fadlan isticmaal emaylkaaga si aad u abuurto xiriir kale oo galitaan.